ဆာမိုအာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ယာကုပ်အမျိုးကို Roggeveen တစ်ဦးဒတျချြရှာဖွေသူ, 1722 အတွက် Samoan အဘိဓါန်ကျွန်းများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပြင်သစ်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်လူးဝစ်က de Bougainville 1768 ခုနှစ်တွင်ကျွန်းများသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ သူ Samoan အဘိဓါန်ရဲ့အထူးထူးအပြားပြားကနူးနှင့်သူ၎င်းတို့၏မူလဥရောပအမည်ဖြင့်စတင်သုံးစွဲသောသူတို့အားသွားလာ၎င်းတို့၏ကျယ်ပြန့်ကျွမ်းကျင်မှုလေးစား "ဒီ Navigator ကျွန်းများ။ "
1899 မှစ. 1914 ဖို့, ဂျာမနီအနောက်ပိုင်းဆာမိုအာပိုင်တော်မူ၏။ ပထမကမ္ဘာစစ်ရဲ့အဆုံးမှာ, နယူးဇီလန်နှစ်နိုင်ငံအကြားယနေ့တိုင်ဆက်ဆံရေးခိုင်ခံ့ကျန်ရှိနေသေးအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးအားဖြင့်ကျွန်းများကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ 1962 ခုနှစ်တွင်, (တွင်လည်းအနောက်တိုင်းဆာမိုအာခေါ်) ဆာမိုအာပထမဦးဆုံးလွတ်လပ်သော Polynesian နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာ "အနောက်တိုင်း" အမည်ဖြင့်ရိုးရိုးဆာမိုအာဖြစ်လာဖို့ကျဆင်းသွားခဲ့ကွောငျး, 1997 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ။ နယူးဇီလန်၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကချမှတ်, ဆာမိုအာဟာပါလီမန်အစိုးရရှိပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အရှေ့ဆာမိုအာကျွန်းစုများ 1900 အတွက် United States ကိုရောင်းချခဲ့သည်။ အခုတော့ "အမေရိကန်ဆာမိုအာ" ဟုခေါ်နှင့်၎င်း၏နိုင်ငံသားများအစိုးရကိုအမေရိကန်စတိုင်မွေးစားခြင်းနှင့်ပင်အမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှ non-မဲပေးကိုယ်စားလှယ်ပေးပို့နေသည်။ အမေရိကန် Samoan အမေရိကန်အခမဲ့ခရီးသွားနှင့်အတူအမေရိကန်နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်
• ကော်ပိုရိတ်အခွန်အဘယ်သူမျှမ: တစ်ဦး Samoan အဘိဓါန် LLC အဘို့အဘယ်သူမျှမကော်ပိုရိတ်အခွန်ရှိပါသည်။ သို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်အခွန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေဟာသူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်သည့်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူတို့အား။
• လျင်မြန်စွာနှင့်လွယ်ကူစွာမှတ်ပုံတင်ခြင်း: တစ်ဦး Samoan အဘိဓါန် LLC ထည့်သွင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆာမိုအာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့အထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အများကြီးပိုလွယ်အောင်, သူတို့ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းမဆိုဘာသာစကားကိုသုံးပြီးဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, တစ်ခုလုံးမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. နှစ်ရက်ကြာပါသည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦး Samoan အဘိဓါန် LLC ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
• အနိမ့်သက်တမ်းတိုးကြေး: တစ်ဦး Samoan အဘိဓါန် LLC သက်တမ်းတိုးဖို့နှစ်စဉ်ကြေးသာ $ 300 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ကမ်းလွန်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့များစွာသောအခြားတရားစီရင်မှုထက်အများကြီးနိမ့်သည်။
• အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါသည်စာရင်းကိုင်စံနှုန်းများ: အဆိုပါ Samoan အဘိဓါန်အစိုးရလွတ်လပ်ခွင့်ကောင်းတစ်ခုသဘောတူညီချက်နှင့်အတူကုမ္ပဏီများမှပေး, စာရင်းကိုင်စံချိန်စံညွှန်းမဆိုအမျိုးအစားမလိုအပ်ပါဘူး။
• အဘယ်သူမျှမနှစ်ပတ်လည် File: Samoan အဘိဓါန် LLCs နှစ်စဉ်စာရင်းစစ် file သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းများတင်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် Samoan အဘိဓါန် LLCs စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တိကျမှန်ကန်ပြီး Up-to-date ဖြစ်အောင်မှတ်တမ်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: Samoan အဘိဓါန် LLCs စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများများအတွက်လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဆက်ကပ်။ နှစ်စဉ်အခွန်သတင်းအချက်အလက်မဟုတ်သလိုကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်စပ်အမည်များကိုမအများပြည်သူထုတ်ဖော်နေကြသည်။
ရှယ်ယာရှင်များ Samoan အဘိဓါန် LLC ရဲ့အနည်းဆုံးရှယ်ယာရှင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။ ရှယ်ယာရှင်များဒေသခံများဖြစ်ရန်မလိုပါနှင့်ကမ္ဘာထဲမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး Samoan အဘိဓါန် LLC များအတွက်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေး $ 300 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဆာမိုအာ LLC မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. တဦးတည်းမှသုံးရက်ကြာပါသည်။ ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများပုံမှန်အားဖြင့်ရာမှပြန်လာသောနေကြတယ် စာရင်းကိုင်အရာရှိ ခုနစျပါးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်း။ ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်သည့်အခါသို့ရာတွင်ထိုသို့ထည့်သွင်းဖို့ကြာအချိန်အရှည်အသေးစိတျမှ name ကိုမှတ်ပုံတင်, မိမိတို့သတိနှင့်ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။